နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဘရူနိုင်း ဒါရူဆလမ်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Dato Erywan Pehin Yusof နှင့် အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ်တို့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ Republic of the Tatarstan သို့ ရောက်ရှိ၊ KAMAZ Holdingကုမ္ပဏီသို့ သွားရောက်လေ့လာ
ဇွန် ၄၊ ၂၀၂၁
နေပြည်တော်၊ ဇွန် ၄
နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် ဘရူနိုင်း ဒါရူဆလမ်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Dato Erywan Pehin Yusof နှင့် အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ် H.E. Dato Lim Jock Hoi တို့အား ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌရုံး သံတမန်ဆောင်၊ ဧည့်ခန်းမ ၌လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ် ဧပြီလ ၂၄ ရက် တွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် အာဆီယံနိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်များ ထိပ်သီးအစည်းအဝေး ရလဒ်များကိစ္စ၊ အာဆီယံအသိုက်အဝန်း ထူထောင်ရေး ကြိုးပမ်းအားထုတ်နေမှုကိစ္စ၊ အာဆီယံကနဦး ဆန်းစစ်လေ့လာရေး အကြံပြုချက်များ အကောင်အထည်ဖော်ရေးကိစ္စ၊ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ဆေး ရရှိရေးအတွက် အာဆီယံအဖွဲ့မှဆောင်ရွက်နေမှု၊ မြန်မာ-ဘရူနိုင်း နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေး ကိစ္စရပ်များ၊ မတရားအသင်းကြေငြာထားသည့် CRPH၊ NUG တို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အသင်းအဖွဲ့များနှင့် အကြမ်းဖက်အဖွဲ့များမှ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များ ဆောင်ရွက်နေမှု၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲစာရင်းမှားယွင်းမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့မှုနှင့် စစ်ဆေးတွေ့ရှိမှုအခြေအနေများ၊ နိုင်ငံအတွင်း တည်ငြိမ်အေးချမ်းသွားချိန်တွင် ရွေးကောက်ပွဲပြန်လည်ကျင်းပြုလုပ်သွားမည့် အခြေအနေ များနှင့် လူသားချင်းစာနာ ထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးရေးကိစ္စရပ်များတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် မည့်ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲသို့ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများဖြစ်ကြသည့်၊ ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင် ၊ ဦးကိုကိုလှိုင်နှင့် တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ကြပြီး ဘရူနိုင်း ဒါရူဆလမ်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး၊ အာဆီယံ အတွင်းရေး မှူးချုပ်တို့နှင့်အတူ အာဆီယံဒုတိယအတွင်းရေးမှူးချုပ် Mr. Garry Ramtee Bin Haji Ibrahim နှင့်တာဝန်ရှိသူတို့တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
ႏိုင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီဥကၠ႒ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ဘ႐ူႏိုင္း ဒါ႐ူဆလမ္ႏိုင္ငံ၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး H.E. Dato Erywan Pehin Yusof ႏွင့္ အာဆီယံအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္တို႔အား လက္ခံေတြ႕ဆုံ
ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္ ၄
ႏိုင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီ ဥကၠ႒ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ ဘ႐ူႏိုင္း ဒါ႐ူဆလမ္ႏိုင္ငံ၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး H.E. Dato Erywan Pehin Yusof ႏွင့္ အာဆီယံအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ H.E. Dato Lim Jock Hoi တို႔အား ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီဥကၠ႒႐ုံး သံတမန္ေဆာင္၊ ဧည့္ခန္းမ ၌လက္ခံေတြ႕ဆုံသည္။
ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံစဥ္ ဧၿပီလ ၂၄ ရက္ တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အာဆီယံႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ထိပ္သီးအစည္းအေဝး ရလဒ္မ်ားကိစၥ၊ အာဆီယံအသိုက္အဝန္း ထူေထာင္ေရး ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနမႈကိစၥ၊ အာဆီယံကနဦး ဆန္းစစ္ေလ့လာေရး အႀကံျပဳခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးကိစၥ၊ COVID-19 ေရာဂါကာကြယ္ေဆး ရရွိေရးအတြက္ အာဆီယံအဖြဲ႕မွေဆာင္႐ြက္ေနမႈ၊ ျမန္မာ-ဘ႐ူႏိုင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရး ကိစၥရပ္မ်ား၊ မတရားအသင္းေၾကျငာထားသည့္ CRPH၊ NUG တို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕မ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနမႈ၊ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ပါတီစုံဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲစာရင္းမွားယြင္းမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့မႈႏွင့္ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိမႈအေျခအေနမ်ား၊ ႏိုင္ငံအတြင္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းသြားခ်ိန္တြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျပန္လည္က်င္းျပဳလုပ္သြားမည့္ အေျခအေန မ်ားႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာအကူအညီေပးေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ မည့္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
ေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီဥကၠ႒ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္၊ ဦးဝဏၰေမာင္လြင္ ၊ ဦးကိုကိုလႈိင္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားတက္ေရာက္ၾကၿပီး ဘ႐ူႏိုင္း ဒါ႐ူဆလမ္ႏိုင္ငံ၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး၊ အာဆီယံ အတြင္းေရး မႉးခ်ဳပ္တို႔ႏွင့္အတူ အာဆီယံဒုတိယအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ Mr. Garry Ramtee Bin Haji Ibrahim ႏွင့္တာဝန္ရွိသူတို႔တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တရုတ်နိုင်ငံ ကာကွယ်ရေး၊ စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံနှင့် နည်းပညာဌာန ဒုတိယအကြီးအကဲ ဖြစ်သူ Mr. Xu Zhanbin အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ဇွန် ၆၊ ၂၀၁၉ Admin 0
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျာမနီနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mrs. Dorothee Janetzke -Wenzel အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ဩဂုတ် ၆၊ ၂၀၁၈ Admin 0
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် လာအိုပြည်သူ့ ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံတော်ဗုဒ္ဓဘာသာဗဟိုအဖွဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဆရာတော်အား ဖူးမြော်ကြည်ညိုပြီး နေ့ဆွမ်းဆက်ကပ်လှူဒါန်း
နိုဝင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၈ Admin 0
နေပြည်တော်၊ ဇူလိုင်- ၁၈ ကိုဗစ် – ၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရာ တွင် အားလုံး ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်ပြီး ကုသရေးလုပ်ငန်း သည် အများနှင့်ဆိုင်သည့် ကိစ္စရပ်ဖြစ်သဖြင့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများသာမက ပြင်ပမှ ကျွမ်းကျင်သူများ အနေဖြင့်လည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကျန်းမာ ရေးဝန်ထမ်းများသည်